कोरोनाले छटपटिएको ५ घण्टासम्म एम्बुलेन्स नआएपछि ट्याक्टरमा अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु ! | Diyopost
कोरोनाले छटपटिएको ५ घण्टासम्म एम्बुलेन्स नआएपछि ट्याक्टरमा अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु !
काठमाडौं, २१ वैशाख । नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १३ दलदलेमा एक कोरोना संक्रमितको एम्बुलेन्स नपाएरै निधन भएको छ । स्थानिय ६५ वर्षिय चिन प्रसाद काफ्लेको एम्बुलेन्स अभावकै कारण निधन भएको हो । करिब ५ घण्टाअघिदेखि छटपटिएका काफ्लेलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन विरामीका आफन्तले नगरपालिकालाई सहयोग मागका थिए ।
नगरपालिकाले ५ घण्टासम्म पनि एम्बुलेन्स उपलब्ध नगराएपछि विरामीका आफन्तले मोटरसाइकलमै भएपनि अस्पताल लैजाने कोशिस गरेका थिए । तर, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मोटरसाइकलमा अस्पताल लैजान नदिएपछि ट्याक्टर बोलाइएको थियो । ट्याक्टर बोलाउँदासम्म जिवित रहेका काफ्लेलाई अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा निधन भएको उनका भाञ्जा प्रेम चापागाइँले दियोपोस्टलाई जानकारी दिए ।
चापागाइँका अनुसार विरामी काफ्लेलाई कुनैपनि दिर्घ रोग थिए । विगत ५ दिनअघि कोरोना संक्रमण भएपछि उनी घरमै आराम गरेर बसेका थिए । तर, सोमबार दिउँसो स्वास प्रस्वासमा समस्या भएपछि एम्बुलेन्स बोलाइएको थियो । ‘एम्बुलेन्स छैन ५ घण्टासम्म कुराइयो । त्यतिका समय पनि एम्बुलेन्स नआएपछि हामीले मोटरसाइकलमा अस्पताल लैजाने कोशिस गर्यौँ । तर, जनप्रतिनिधिले अस्पताल लैजान दिनुभएन,’ चापागाइँले दियोपोस्टसँग भने,‘ट्याक्टरमा हालेर केउरानी अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मामाको निधन भयो ।’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन देवचुली नगरपालिकाका मेयर पूर्ण कुमार श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा आफू मिटिङमै रहेको बताए । मृतक विरामीको विषयमा प्रश्न गर्ने वित्तिकै उनले फोन काटे ।
नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
धादिङ्ग अस्पतालको आइसोलेशनमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु